Al-Shabaab oo dagaal kale kusoo qaaday degaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug – Xorriya Online
Al-Shabaab oo dagaal kale kusoo qaaday degaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug
Kooxda Al-Shabaab ee ka dagaallanta Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ayaa waxay dagaal hoobiye-yaal ku billowday kusoo qaadday degaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug.
Dad goobjooge yaal ah oo aan la xiriirnay ayaa waxay noo sheegeen in saacad kahor uu ka billowday deegaanka loo yaqaan Bacaadweyn oo ka tirsan gobolka Mudug dagaal u dhaxeeya dadka deegaanka iyo ciidamada daraawiishta Galmudug oo iskaashanaya iyo Kooxda Al-Shabaab.
Weerarka ayaa ku billowday Hoobiye-yaal dhowr ah oo lagu soo garaacay magaalada, iyadoo markii dambana uu billowday iska horimaad toos ah kaasoo u dhaxeeya dhinacyada isku haya deegaanka Bacaadweyne.
Dabayaaqadii bishii ina dhaaftay ee December 2020 ayey kooxda Al-Shabaab weerar culus kusoo qaadday deegaankaasi, waxayna halkaasi kaga furteen ciidamadii deegaanka ku sugnaa iyo kuwii maamulka Galmudug hub iyo rasaas xooggan, taasoo keentay in mar kale ay soo weeraraan muddo bil ah kaddib.
Dagaalka oo billowday wax ka yar saacad ayaan ilaa iyo hadda lasoo sheegin qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca, sidoo kale maamulka Galmudug weli kama aysan hadlin weerarka ay kooxdu kusoo qaadeen deegaanka Bacaadweyn oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan Galmudug kuwaasoo halkaa loo geeyay in ay sugaan amniga magaalada Bacaadweyn.